အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: September 2008
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၃၀ ကျော်
အရှေ့ ဆီ ရောင်နီပြို့ မိုးသောက်
ကုသိုလ်ရေး ဟာ..ဒို့ ယဉ်ကျေးမှု
အမျှဝေ သာဓု..ငယ်စဉ်က ပြုဖူးတယ်။
ချောင်းတွင်းက မှောက်ရက် ကိုယ်တော်..
ဘွဲ့ တော်..ဘယ်အမည်ပါလိမ့် 
မျက်နှာတော်ပုံကျ..ဘယ်သူ သိပါလိမ့် 
မယ့် သားတော်ပျောက် ဘယ်လိုရှာရပါခြိမ့်။
ဒို့ ဗမာပြည်မှာ သာသနာစစ် ပြတ်လပ်ခဲ့..
ပြန်တွေးတိုင်းနှစ် ( ၃၀)..
သာသနာအရေး စတေးမဲ့ သားကောင်းစစ်သည်။
မသဒ္ဓါ ( ၉။၉။၀၀၈)
မသဒ္ဓါ၏ သတင်းအစအန မရ..ပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်သော သား သံဃာအရှင်မြတ် အား အမျှပေးဝေပါသည်။ သတင်းမကြားရသည်မှာ တနှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ ဘာသတင်းမှ မရသေးပါ။ ပထမအကြိမ် ကံဆောင်စဉ်က. မစိုးရိမ်တိုက်တွင် သီတင်း သုံးခဲ့ဖူးသောကြောင့် ဤ တစ်ခေါက်တွင် ပါဝင်မည်မှာမြေကြီး လက်ခတ် မလွဲပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 6:32 AM 1 comments
Labels: poem, Politics, Truth
သိနိူင်မလား..မသဒ္ဓါ အပေါ် တင်နိုင်တဲ့ ပုဒ်မများ။
မသဒ္ဓါ သာ အခုနေ..
နအဖ က..ဘယ်လို ပုဒ်မတွေ နဲ့ များ အပြစ်ရှာ..
ဖမ်းဆီးစွပ်စွဲ ကြလိမ့် မလည်း။
ဦးကြည်ဝင်းက အမှု အလိုက်ကောင်း..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမှု အခြေအနေကောင်းတော့
သူဘဲ ဌားမှထင်တယ်။ မိုးသီးကတော့ မကြိုက်ဖူး ပြောဖူးတယ်။ အို ..နိုင်နိုင် မနိုင်နိုင်..လူရိုသေ ရှင်ရိုသေ..ရှေ့ နေ တော့ရှိမှပေါ့။ တရားသူကြီး ကတော့..ရှေ့ နေ ဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း..သူ့ နားထင်ကပြောင်းဘဲ ကြောက်မှာပါ။
ထောင်ထဲမှာ..ဦးဝင်းတင်နေခဲ့တဲ့ အခန်း ကို လာဘ်ပေး.. အပိုင်စားယူမှထင်တယ်.။ ဒါက အလင်းရောင် မရှိ မှောင်နေမှာ..
မသဒ္ဓါ က အလင်းရောင်ထိုးရင်..အိပ်မရဘူးလေ။
အင်း.. အော် စုဆောင်းထား ငွေသား..အင်း ထောင်ဝင်စာ လာတွေ့ ဖို့တနှစ်စာတောင်ရှိပါ့မလား။ ငပိကြော်တောင် စားနိုင်တော့ဘူး ထင်တယ်။ ယောက္ခမ ကြီးကိုဘဲ မျက်နှာချိုသွေးရမှာဘဲ။ လာတွေ့ ဖို ပေါ့။ သူက သူ့ မျက်နှာ..သတင်းစာမှာ ပါချင်ရှာတယ်။ အမေက ရှက်တတ်တော့ မီဒီယာ နဲ့ ဗျုးရဲမယ် မထင်။
DVB တို့VOA တို့RFA တို့BBC တို့ ရေ..မသဒ္ဓါ ရုံးထုတ်ရင် ဗျုးကြဦးနော်..။ နို့ မို့အတွင်းထဲ ကြိတ် အဆော်ခံ နေရမယ်။
မီဒီယာထဲ..မသဒ္ဓါနံမည် မပါရင်..သူတို့ က..ချောင်ထိုးထားမှာ..ပီညဲရိုးလာတုန်းက ပြတဲ့ အိုးသစ်နဲ့ ချက်တဲ့အစာ မသဒ္ဓါ မြီးရမယ် တောင်မထင်ဘူး။
AAPP ရော ကျမ လှတပတ ဓါတ်ပုံလေး တရံချိတ်ပေးကြဦးနော်။
ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်စား..လူမိုက်တယောက်တိုးပြီဟ လို့ 
အရင်ခေတ်ကတော့ သခင်ပေါက်စ..ထောင်ခြောက်လတဲ့ ဦးဝင်းတင်က တော့ (၁၉ )နှစ်ကြာတယ်။ ငယ်ငယ်က..ငါတို့ တွေ လွတ်လပ်တဲ့ခေတ်မွေးတာ ကံကောင်းတယ်အော်နေတာ..အမှန်က..ခုမှ ပိုဆိုးသေး..သခင်ဖိုးလှကြီး တောင် ငိုသွားမယ်. သူတို့ လက်ထက်က မှ မီးထွန်းနေနိုင်သေးတာ..အခုခေတ်က..မှောင်မဲ နေတာဘဲ။
ဆရာစံလက်ထက်က ချစ်တီးထက်လည်း နအဖက ပိုဆိုးသေး..ချစ်တီးက သမီးဘဲသိမ်းရုံသိမ်းတာ..နအဖ စစ်သားက အပြုံလိုက် စော်ကားပြီး သတ်ပစ်ခဲ့ရော..
ဗိုလ်အောင်ကျော်.ဒုတ်ရိုက်ခံရတာ. တယောက်ထဲသေတာ..မျိုးချစ်ဗမာတွေ က အော်လိုက်ကြတာ..အာဇာနည် တန်းပေးလိုက်ရုံဘဲ..ဟိုချောင်းထဲက အညိုအမဲစွဲ ပျံနေတဲ့ ကိုယ်တော်ကျ..ဘယ်သူမှ အာဇာနည်မပေးကြဘူး..ဘွဲ့ တော် တောင် မသိကြရှာဘူး..
ကိုကိုဝင်းလည်း သေတာဘဲ..ဒို့ ခေတ်က ပိုဆိုးပါတယ်။
မသဒ္ဓါ..ဒီနေရာလေးမှာ.. မရေးတတ်ရေးတတ်..ကဗျာ..လိုလို ဘာလိုလို..
အိပ်ဖွင့်ပေးစာတွေ လာလာရေးနေတာ..၂၀၀ရ -၂၀၀၈..ကဗျာ..အပုဒ် ၃၀၀ လောက် ရှိပါပြီ။
မသဒ္ဓါ အတွက်..နအဖ ကတင်မဲ့စွဲချက် တွေ သိချင်ပါတယ်..ဝိုင်းစဉ်းစားပေးကြမလား..
မကြောက်တတ်လို့ ..နည်းနည်း ကြောက်ကြည့်ချင်လို့ ပါ။
အပြင်က ဖင်ပိတ်အော်တယ်ဘဲပြောပြော..ဘယ်သူ ကဲ့ရဲ့ မဖြုံပါဘူး။ ပြောကြပါစေ..နှစ်သက်ရာ..
နအဖ မတရားလုပ်နေတာ...ဘာမှ မလုပ်ဘဲ ထိုင်ကြည့်နေတာထက်စာ...
တန်ရာတန်ရာလုပ်. ပါးစပ်လှုပ် လက်လှုပ်နေတာက ကောင်းသေးတယ်ဘဲ မသဒ္ဓါထင်ပါတယ်. နည်းနည်းလေးဘဲ နှဲ့ ရ နှဲ့ ရ..နည်းနည်းလေးဘဲ ခနဲ့ ရ ခနဲ့ ရ..နည်းနည်းလေးဘဲ သူ တို့ သွေးတက်အောင် လုပ်ရ လုပ်ရပေါ့..
မကြီး ရွာပြန်ရင် ထောင် ဘယ်နှစ်နှစ်နဲ့ မသဒ္ဓါတန်နေပါပြီလည်း..မရှိမဲ့ရှိမဲ့ ဂုဏ်လေးယူကြည့်စမ်းပါရစေ.။
နအဖ ကလွဲ တပြည်လုံးကို ချစ်သော
အပျော်စ တာပါ...တနှစ်ပြည့် လူတွေ ဒေါသထွက်နေကြတာ..ရီရအောင်လို့ ...မသဒ္ဓါ ဘေးကင်းရန်ကင်း ကျမ်းမာပါတယ်။
ဒေါ်အမာ လိုအသက် ၉၀ စောင့်ပြီး ဒီမိုကရေစီနဲ့ မြန်မာ ပြည်ကို မြင်ဖူးအောင်ကြည့်သွားချင်လို့ ပါ။ အင်း အိမ်မက် ဘဲပေါ့နော်..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:35 AM6comments
ဟိုမှာ ဗုံးကွဲ ဒီ မှာ ဗုံးကွဲ
သူတပါးကို အမနာ ပါ့မနာပြောချင်တဲ့အခါ။
ကောင်းတာလုပ် ငါတို့ ဘဲ..
မဟုတ်က ဟုတ်က..ဟာ ဟာ့ ဟ..
ကြားသူ အူတက် သေသွားမယ်..
ကျော်ဆန်း ဟာသပြော..ဇာကနာ ငိုသွားပါ့မယ်။.
မကောင်းတာ လုပ်တာဆို အတိုက်အခံ.
NLD ။ မွန်ပါတီ။ ကရင်နီ။
ရှမ်း ရခိုင် ကရင် ကချင်။
ရုရှသာ မာန်ရ် နတ်မင်းတို့ ရဲ့ချစ်ဖော်
သူတို့ ကိုဘဲ ပြည်သူလေးစား..
သိပ်ချစ်လွန်းလို့မော် မကြည့်ရဲရှာကြဘူးတဲ့။
ယောက်ျားဆို သန့် ရှင်း
သေနတ်ကြီး ပြကာ ဖြဲခြောက်.
မင်းတို့ ဘဲ သောက်ကြောက်.
မဆိုင်သူ ဆွဲထဲ့..နင်ဟဲ့ ..နင်ဟဲ့
NLD လက်ချက်လား?..NLD မှာအပ်တိုတောင်မရှိရပါ..
ရှမ်းလက်ချက်လား? အလိုလေး. မလုပ်ပါတဲ့ဗျာ..
ကရင်နီလက်ချက်လား? .ရန်ကုန်တောင် မရောက်ဖူးပါ..
ကျောင်းသားတွေက တောထဲ မှာနေတာပါဗျာ
စွမ်းအားမြှင့်ရဲ့ ရှိမဲ့စုမဲ့ဗုံး သုံးသေးဘူး
ထိုးတဲ့လက်ညှိုးက တပတ်လည် ဝိုင်း..
NLD ပါတီ ဖြုတ်ဖို့ဥာဏ်ကလိမ်ဆင်..
ဖမ်းဖို့အမှူဆင် ခြိမ်းခြောက်
လိမ်ညာဉ် တွေ .တကမ္ဘာလုံးသိပါပေါ့။
ဆန္ဒပြသူ ၏..ရင်ဘတ် ရှေ့ တည့်တည့် ၊
တိုင်းပြည် ချီးတွင်း မကျအောင်။
အလုပ်တွေ များရတဲ့ ကြား
ဟော လို့မ ကျေ ၊ သံ ပု ရာ ရေ၊
အီး ..ဘွတ်.. ရွှတ်.. ဒိုင်း။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:09 AM0comments
Labels: Joke, poem, Truth
အမိမြန်မာပြည်၏ သားမောင်သို့ ပေးစာတစ်စောင်
အမောင် စစ်သား..သားမောင်များတို့ ..
သားသည် မြန်မာ ဖြစ်တော့သည်။
သားလုပ်ရပ်သို့အမေဂုဏ်ယူသည်။
BIA, BDA, ကဲ့သို့ 
ပြည်သူမှ ဖွဲ့ စည်းထား..တပ်မတော်သားများမဟုတ်။
ချောဆွဲထားတဲ့ ခလေး စစ်သား။
အဖေ စစ်မျိုး..အိမ်တော်ပါ ကျွန်မျိုး.
အဆီနဲ့ အသား..အထက် ကစားမယ်..
မစားလို တဲ့အသား..အလယ်အဆင့်က တွယ်ထားမယ်..
ကြွင်းကျန် အရိုးကပ်အသား..အောက်ခြေက ဝါးမယ်..
အဆင့် အဆင့် လက်ဦးသူက ဖိတွယ်ရစ်..
ပြည်သူ့ အတွက်ကျ ဘာမှမချန်။
နိူင်ငံခြားသွား ပညာတော်သင်ဖို့ ရာ..
ပေးရတဲ့ လာဘ်..ပြုံးရတဲ့ အပြုံး..
ဘဘ မမ..သူတို့ စိတ်ပျော်သလိုခေါ်ရ..
မယား ခင်ဖုန်း..ကတော်ကြီးကို ဖါးနှိပ်နယ်ဦး
ကိုယ့်အတွက် နေရမဲ့ ချောင်ကလေး။..
ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် တွယ်သာတုတ်။
တရား မတရား. တွယ်သာစား.။
မဆင်းခင် အကုန်..နှံ့ စို့ လားဟေ့။
ဆင့်ပါးစပ်ထဲ နှမ်းစေ့ သိပ်မကျ။
လူ၁၀၀ မှာ ကောင်းတာ တယောက်ဘဲရ..
ဘဘ မယားကိုချစ်မှ လင်နေရာမြဲတယ်။
ထန်းညက်ခဲ တွယ်နေတဲ့ ပုရွက်ဆိတ်တစ်စု။
လူဆိုတာ တယောက်ထဲ မရှင်။..
လူမှု လူ့ အစုအဝေး..
နိူင်ငံတော် ပြည်သူထု ပိုင်ဆိုင်မှု အစုစု
ပြည်သူက မပြောရဲတာ.. မလိုချင်လို့ မဟုတ်။
ပြည်သူက ပြောမယ်ကြံ..သတ်ပစ်တာ..စစ်တပ် သရုပ်။
ဒါဟာ..စင်ပေါ်မှာ ဖုံတက်နေတဲ့ ဘုတ်အုပ်။
၂၁ ရာစု စစ်အေး စစ်ပွဲ.
လက်နက်ပြ တိုင်းပြည်ချင်းနယ်မချဲ့ 
ကျောသပ် အချိုပြရဲ့ ပြီးမှ တစစီ မျိုခဲ့ ..
ရာရှင် တရုပ်. အိန္ဒိယ မြောက်ကိုရီးယား
သားမောင်၏ အရွယ်။ ၂၀ ကျော် ၃၀..
နောက်ထပ်..အနှစ် ၃၀ ကျော် လုပ်ရမဲ့အလုပ်…
တရုတ် အဆိပ်သင့်နိူ့ မှုန့် 
တရုပ် ပိုးသတ်ဆေးသင့် သီးနှံ။
တရုပ်က ပြန်သန့် စင် ပလပ်စတစ်ပန်းကန်.
တရုတ် စဉ့်နီတုန်းပေါ် ပက်လက်..
ပြတ်တော့မဲ့ ဒို့ မျိူးဆက်..မင်းကြည့်ရက်သလား။
အမှား တွေကို.. မြင်အောင်ကြည့်လှဲ့ 
သားသက်တမ်း..နောက် အနှစ် ၅၀ ထဲ
မမှန်တာမြင် ပြင်ရမဲ့ မဟာဂရုဏာ လူသား
ပြည်သူ့ ရိက္ခာပေါများဖို့ က ပထမ
ခလေးတွေ အခြေခံ ပညာတတ်ဖို့ က ပဓါန
လူတွေ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍက မူရင်း.။
အဓိက လိုအပ်ချက်တွေ ကိုအရင်မရှင်း.
ဆင့် တွဲလောင်းကို ခွေးကမျှော်ခဲ့
ဘယ်တော့ မှ မအောင်မြင်မဲ့
ရုရှားကို ဖါး အခစားဝင်
အန္တရာယ်နဲ့ ထွေမခင်း သင့်ပါဘူး..။
ဘရိန်း ကျူမာ ကင်ဆာ ဖြစ်မှာက သင်။။
သင့်၏ အသက်ကို စတေး..
ထောင်ချောက်က ဒိန်ခဲလေးဘဲမမြင်ပါနဲ့ ..
နအဖ ဟာ..မင်းကို ဆွဲစားနေတယ်။
စစ်သည်ကောင်းတွေ ဆို ဘာလုပ်သင့်တယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:48 AM2comments
သားနှစ်သားက စည်းလုံးညီ..သင် ဘယ်လိုနေမည်၊ မောင်စစ်သား.
ပုရိက္ခရာ ရှစ်ပါး..အမှန်တရားပြ ဘိက္ခူ။
သာသနာ အတွက်ဆို..အသက်ပင်စွန့် 
ရွံ့ ရွံ့ ချွန်ချွန် ဗုဒ္ဓ၏ ၀န်ထမ်းများ..
ပျိုပျစ်နီစွေး လူငယ်၏ သွေး.
တိုင်းပြည် မကျခင် ချောက်ထဲ..
သူတို့ ဘဲ ဆွဲကယ်ထားရသတဲ့။
နိူင်ငံ ဘဏ္ဍာတော်စား။ သယံဇာတစား
လာဘ်စား။ ပန်းဦးခြွေ မုဒိန်းသမား
ဆိုးညစ်တဲ့ အာဏာရှင် အမွေဆိုး..
နိုင်ငံကို အမည်းရောင်ဆိုး..အရိပ်မမိုးထားခဲ့ပါနဲ့ .။
မင်းဆိုတဲ့ သစ္စာ အဓိဌာန် ( ၄) ချက်..
မင်း ဝစီစက် တွေ..ပြန်လှန်ကာ ဆန်းစစ်.
မြန်မာလူမျိုး ပြန် ဂုဏ်ယူထိုက်မှာ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:16 AM0comments
မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေးသာ အားစိုက်ရင်း
တော်လှန်ရေးသမား..အလစ်ချောင်းကာ ambush လုပ်
မီဒီယာသမား..အနံ့ ခံ ကမ္ဘာ့ ကြား..သတင်းများ ရေးထုတ်
ရံပုံငွေ သမား.. ဈေးရောင်းပွဲ သပိတ်ရံပုံငွေလုပ်။
ကိုယ့်တာ ကို ကိုယ် လုံအောင်သာ ချုပ်နေ။
ဒို့အားလုံး မြန်မာပြည်ဖွား.
ကရင်။ ဗမာ။ ချင်း၊ မွန်
ကယား။ ရခိုင်၊ ကချင်၊ ရှမ်း
နအဖ ကြမ်းခါမှ ပိုမို စည်းလုံး..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:53 AM0comments
လူ့ ဘ၀ အပျော်ဆုံးရက်
ရှင်းသန့် တဲ့ ညှင်းလေပြေ..
ဗြဟ္မာဇိုရ် တရားပွါးတဲ့ အခါ..
မိစ္ဆာ ဝါဒီတို့လိုက်ဖျက်.
နအဖ ဘယ်လို တိုက်ဖျက်..
၁၉၈၉ မှ ၂၀၀၈.
( ၁၉ ) နှစ်ကြာ..ထောင်ထဲချရုံ..
ငါ့ မျက်စိသာ မှုန်ချင်မှုန်
ငါ့ ဆံပင်တွေသာ ဖြူဖျော့ ပါး
ဗမာမြေ မှာ ဒီမိုကရေစီ ရကိုရရမယ်။"
မြန်မာ့သမိုင်းကို သန့် စင်..
ဒို့ အားလုံး..နအဖရဲ့ စစ်ဖနောင့်အောက်.
ညီညာ ပါမှ.. အနိုင်ရ။
ဆက်လက် တိုက်ကြစို ။
မသဒ္ဓါ ( ၉။၂၃။၂၀၀၈)
ဘဘ ဦးဝင်းတင် အတွက်..အားပေးတာပါ။ အလံမလှဲသောစိတ်ဓါတ်အား မသဒ္ဓါမှ..လေးစားဂုဏ်ယူစွာဖြင့်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:44 AM 1 comments
ခုထိ မြန်မာ့ ရင်ထဲရှိနေဆဲ။
မေတ္တာကို..သေနတ်ယမ်းနဲ့ သတ်တဲ့နေ့ 
ဗုဒ္ဓသာသာ အရောင်မဲ လွှမ်းခဲ့တာ
ရင်သပ်ရှုမော ဘဝရဲ့ လက်တွေ့ ။
ချောင်းပေါ်က..ပုပ်လို့ ပေါ်တဲ့ ကိုယ်တော်..
စိတ်ယုတ်ညစ်..ဟုတ်လို့ ကျော်တဲ့ စစ်အစိုးရ..
တနေ့မီးခိုးအူတာ ပျောက်..
မီးဟုန်းဟုန်း တဖန် ပြန်တောက်ရမည်.။
ထစ်ချုန်းမိုး တဖန် ရွာသွန်းရမည်.။
ဗမာမှန်ရင်..အသက်ကိုစွန့် ကြစို့ ။
လုပ်သားပျားပီပီ..အသေခံ..ရန်သူကို တုတ်ကြစို့ ။
ရရာလက်နက် ကိုင်ဆွဲ..တော်လှန်ကြပါစို့ ။
မြန်မာ့ သမိုင်းကြောင်း တစေ့တစောင်း..
ရှိနေတဲ့ ဘိုးဘွားမြေ တလက်မ..
ဒို့ သွေးတွေ အပေါ်ကထပ်..
ဒို့မြေးမြစ်တွေ.လွတ်လပ်ဖို့ 
သင် ဘာတွေ တွေဝေနေလည်း..
ကျုပ်တို့ အဟောင်းစား ခွေးတစ်ကောင်မဟုတ်ဘူး။
သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဗမာ။
ဝံသာနု အရေး တိုက်ရဲတဲ့ ဒို့ ဗမာ။
ကဲ ပြောနေကြာတယ် သူငယ်ချင်း
ဒို့ မြေ ဒို့ ပိုင်ရမည်။
မပြီးတဲ့ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး..
ဒို့ သွေးနဲ့ ဆက်ရေးဖို့ 
တနှစ်ပြည့် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးသို့ ..သွေးတစက်ဘဲကျန်ကျန်..ဒို့ တွန်းလှန်မည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:20 AM0comments
ကျမ နဲ့ မေရီအန်တော်နက်။ ကျမနဲ့ ဂျုန်း
အဖေ့နား ပါးကပ်. တိုးတိုးလေး မေးတယ်။
ဒီလိုဘဲ လူတွေ ဘာလို့ ကြည့်နေကြတာလည်း။
အဖေ က ပြန်ပြောတယ်။
ရှူး တိတ် တိုးတိုး.နေ..ကြီးလာရင်..
တနေ့ကျမသိအောင် လုပ်မယ်”
လူဆိုးတွေ မိရင်.. ပျော်ရွှင်
မြန်မာပြည်က စစ်ဓါးမြ သခင်
စာလုံးမဲကြီး နဲ့နင့်နံမည်၊
၈၈၈၈ ကျောင်းသားတွေ အားလုံးထောင်ထဲ
သက်ဆိုင်ရာ အမျိုးတွေ လိုက်ဆွဲ
ယောက္ခမ မနေရ၊ ယောက်ဖ မနေရ။
လူမမယ်မနေရ။ ဗိုက်ထဲက ခလေးမနေရ။
ဝေသာလီ ပြည်စီးတဲ့ ဘီလူး။
အလှည့်ကျ မနွဲ့ ရဖူးတဲ့
စစ်နဲ့ အချစ်ရဲ့ တရားတဲ့ ဥပဒေ
ဒို့ တွေ လည်းအတုယူကြ..
သူ့ အမျိုးလည်း..အစိတ်သား ရှင်းပစေ။
ဒို့ လည်း ကောင်းကောင်းပြန်ဆပ်ခဲ့ကြ။
ငယ်ငယ်က သွေးတွေကြောက်လို့ 
အဖေရင်ခွင်ထဲ ပုန်းတဲ့ ခလေးငယ်..
သံချပ်ကာဝတ်နဲ့သူရဲကောင်းမ.ဂျုန်း လို..
သာသနာ အတွက် စတေးခွင့်
ရာဇ၀င်ကြွေး အဆုံးအထိ ဆပ်မယ်။
လူဆိုးကို နှိမ်နင်းဖို့ မွေးဖွားခဲ့တယ်။
ဘယ်တော့ မှ ဂုဏ်သိန်မငယ်။
မသဒ္ဓါ ( ၉။ ၂၅။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 3:12 AM0comments
ရခဲတဲ့ လူ့ ဘဝ
ကိုယ့် ကိုကိုယ်ချစ်တာ သဘာဝ
သူများလည်း ငတ်မှာ ကြောက်တယ်
သူများလည်း နာမှာ ကြောက်တယ်
အစာစား မှ ငါလှမယ်။
လူ့ ဘောင်ရဲ့ လောကဝတ်တွေထဲ
အပ်တို မပိုင်တဲ့ မုဆိုးမ။
ပုဆိုးခြုံထဲက ပြတဲ့ လက်သီး..
သမက်နွား ဖမ်းရဲတဲ့ သူရူး..
ဒို့ တွေ မော်မဖူးနိုင်ဘူး။
ပေးမယ်ကတိနဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ..
ဘာအခု မှ ရူးဟန်ဆောင်နေသလည်း။
NLD သာ အကြမ်းဖက်..
နှစ် (၂၀ ) စောင့်စရာမလိုဘူး။
NLD သာ တရားမဲ့.
သန်းရွှေ ဒီထိ အသက်ရှည်မယ် မဟုတ်ဘူး။
ပလောင်းပလဲ..မယားငယ်ချွဲတွေ ချွဲမနေနဲ့ ။
အစာ မရ..ကျုံလှီ မောပမ်း.
ဒီလို လူသားတစ်ယောက်ကိုမှ မစာနာ.
" ဒေါ်စု အစာငတ်ခံတာ မဟုတ်ပါ " ဗြောင်ညင်း
သင်ကရော ဘယ်လောက် အပြစ်ကင်း
သင် စောင့်ဖူးပါရဲ့လား ဦးသန်းရွှေ။
" ဒါ ဒို့ များနဲ့ မဆိုင်။"
နာဂစ်ခံရ ခလေးများ စားစရာမဲ့..
" မဆိုင်သလိုဘဲ သူနဲ့ "
သူကတော့ တဖြဲ နှစ်ဖြဲစား..
တနေ့ တနေ့ ..သေဖို့ ဘဲနီး..
မသဒ္ဓါ ( ၉။၁၁။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:00 AM0comments
အရူး ဘုံမြှောက်ကြတဲ့ အခါ..လူရူး အာဏာတောင့်တဲ့အခါ
စစ်အာဏာသိမ်း နှစ် (၄၆)က
စေတနာနဲ့ လား ?…သေချာရဲ့လား?
လေ လာမထွားနဲ့ ?
၁ဝ တန်း မအောင် ဗိုလ်ကတော်များ..
ပေါချောင်ကောင်း ဘွဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်။
ကျောင်းသားမဲ့ ကျောင်းများ ကျီးနဲ့ဖုတ်ဖုတ်ဖြစ်။
ပညာတတ်များ ခေါင်းငြိမ့်တတ်ရုံ ပုတ်သင်ညိုဖြစ်။
ချမ်းသာသူများ..ကျီးလန်ု့ စာစား စစ်သားဓါးမြစာဖြစ်။
ရန်ကုန်ရွှေမြို့ တော်ကြီး ..မြို့ ပျက်ကြီးဖြစ်။
သံဃာများ ဗုဒ္ဓ၏ သစ္စာတရားဟောကြား ကဘော်ချိုင့်လားရမည်။
ပြည်သူမှာ တနေ့ လုပ်တနေ့ စား တုံးလုံးစာမရှိပြီ။
လူထု ဆေးရုံမှာ ဆေးမရှိ..လူနာတွေ.သေကုန်ကြပြီ။
ဘယ်ကဏ္ဍမှ မတိုးတက်..ကမ္ဘာ့ အောက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ရပြီ။
နအဖ ၏ ဒို့ အရေးသုံးပါး
ရှရှား။ တရုပ်။ မြောက်ကိုရီးယားကို အဖေလုပ်မည်။
ခုံမေနီ။ ခါမေနီ။ အိုမာ။
ပြည်သူ့ အချစ်တော် အာဏာရှင်။
သူ က..ဘာသားနဲ့ ထုထားရလို့ လည်း?
မကြာတော့မဲ့ တစ်နေ့ ဆီ။
မသဒ္ဓါ ( ၀၉။၁၀။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 4:39 AM0comments
DNA ပြုန်းတီးနေတဲ့ ဘုရင့်နောင်ရဲ့သွေးစက်များ
အကုသိုလ်..လုပ်.." အ ကုသိုလ်"လာမယ်။
အရှုပ်တွေလုပ်.." အ ရှုပ်ဘဲ" ရမယ်။
မြန်မာ အရေးမှာ လူတတ်ကြီးလုပ်..
ဒီစက်တင်ဘာ မှာ..နှစ်ပတ်လည် ပြန်စကြစို့ ရဲ့။
ဒီစက်တင်ဘာ မှာ..အရိုးတွန် ပြန်စကြစို့ ရဲ့။
မြန်မာ တဖန် ပြန်လွတ်လပ်ရန်
သတ္တိနဲ့ ဗျတ္တိ..မော်ကွန်းရှိတဲ့ ဗမာ..
စစ်နိူင်ထားတဲ့ ထိုင်း ပြည်သူတောင်မှ..
ပြည်သူက်ို အရှင်လတ်လတ်..မီးသဂြိ င်္ုလ်တဲ့ပွဲ။။
ဘုရင့်နောင်ရဲ့ လက်သည်းကြား အပ်စိုက်သောစစ်သည်..
ဒါ ဒို့ ဗမာဖြစ်သည်။
အခုများမှာ တွေးတိုင်း ကြေကွဲ..
ဒို့ တွေ လက်ထက်ကျ
သူရဲ့ စုထားသမျှ မြန်မာမြေဆုံးရှုံး
ဗုဒ္ဓ ဘာသာ၏ အနှစ်သာရ..
ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်ကသာ ထိန်းသိမ်းရာ၏။
မသေချင် တိတ်တိတ် ..
ဘယ်သူမှ အသက်မစွန့် ရဲ
ကြက်မှာ အရိုး..လူမှာ အမျိုးပေါ့..
အသက်မသေလည်း…ဂုဏ်သိက္ခာ သေနေတဲ့ ဗမာမျိုး..
ရဲရင့် ဇွဲ..မနက်ဖြန်တွေ.ပြုံးကြနိူင်စေဖို့ 
မသဒ္ဓါ ( ၉။၄။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 10:47 PM2comments
လူလိမ်မာ နှင့် လူမိုက်
လဲနေသူကို အားပေးရန် အသင့်
ကျမ ရည်ရွယ်ရာ..ဒီနေရာဟာ အညတြအာဇာနည်များ အတွက်..အမှတ်တရကျောက်တိုင်တစ်တိုင်..အားပေး ကဗျည်းထိုးရာ ပန္နက်တိုင်..နောင်လာသားများ ကြားသိနိူင်စေ..
အာဇာနည်အမျိုး..အရိုးနဲ့အလံထူနိူင်စေ။
မသဒ္ဓါ (၇၊ ၃၀၊၂၀၀၉)
လေးစားစွာဖြင့်..အမှတ်တရ.... မြင့်မြတ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ဂုဏ်ရည်(၁)။ မြင့်မြတ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ဂုဏ်ရည် (၂)။ မြင့်မြတ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ဂုဏ်ရည် (၃)။ မြင့်မြတ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ဂုဏ်ရည် (၄)။ ဒေါ်ခင်ကြည် သို့အာဇာနည်များသို့ (၁) အာဇာနည်များသို့ (၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၁) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၂) ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (၃) ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးသံဃာတော် (၁) ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးသံဃာတော် (၂) ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးသံဃာတော် (၃) ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးသံဃာတော် (၄) ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးသံဃာတော် (၅) သီရိလင်္ကာမှ ကိုယ်တော်များသို့၈၈ ကျောင်းသားများ၏မိခင်များသို့၈၈ ကျောင်းသားများသို့ (၁) ၈၈ ကျောင်းသားများသို့ (၂) ၈၈ ကျောင်းသားများသို့ (၃) ကျောင်းသားတပ်မတော် (၁)ကျောင်းသားတပ်မတော် (၂) ခွပ်ဒေါင်းများသို့ (၁) ခွပ်ဒေါင်းများသို (၂) ခွပ်ဒေါင်းများသို့ (၃) ခွပ်ဒေါင်းများသို့ (၄) ခွပ်ဒေါင်းများသို့ (၅) ခွပ်ဒေါင်းများသို့ (၆) ခွပ်ဒေါင်းများသို့ (၇) ခွပ်ဒေါင်းများသို့ (၈) ကွန်တိန်နာတွင်းကရွှေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားများ နီလာသိန်း နှင့် ဂျင်မီသို့ဗုံးကွဲသမဂ္ဂကျောင်းသား ၇-၇-၆၂ (၁) ဗုံးကွဲသမဂ္ဂကျောင်းသား ၇-၇-၆၂ (၂) မြန်မာပြည်သားများအတွက် (၁) မြန်မာပြည်သားများအတွက် (၂) မျိုးဆက်သစ်များသို့အပြစ်မဲ့ပြည်သူများသို့ (၁) အပြစ်မဲ့ပြည်သူများသို့ (၂) ကလေးစစ်သားများ၏ မိဘများသို့ (၁) ကလေးများသို့မုန်တိုင်းခံ ပြည်သူများသို့ (၁) မုန်တိုင်းခံ ပြည်သူများသို့ (၂) မုန်တိုင်းခံ ပြည်သူများသို့ (၃) မုန်တိုင်းခံ ပြည်သူများသို့ (၄) မုန်တိုင်းခံ ပြည်သူများသို့ (၅) မုန်တိုင်းခံ ပြည်သူများသို့ (၆) မျိုးဆက်သစ်များသို့ မျိုးဆက်သစ်များသို့ဦးဝင်းတင်သို့ (၁) ဦးဝင်းတင်သို့ (၂) ဦးမောင်ကို ဆိပ်ကမ်းသမဂ္ဂသို့ဖြူဖြူသင်းသို့ (၁)ဖြူဖြူသင်းသို့ (၂) မောင်ကိုကိုဝင်း အတွက် လူထုဒေါ်အမာအတွက်(၁) မိုင် ပေါင်း(၉၀၀) ဖြတ်သွားသော ရဲဘော်များ Ewen Hardie “ Barefoot for Burma” ကိုဌေးကြွယ် အတွက် (၁) အေသင် နှင့် ဇော်မင်းထွေး (၁) ဆရာကြီးဦးတင်မိုးအတွက် (၁) ဆရာကြီးဦးတင်မိုးအတွက် (၂) စင်သီယာမောင် ကိုတင်ကျော် ကိုဇာဂနာ ကိုဇာဂနာ နှင့် ယုဝတီကြည်ဦး ကိုကျော်သူ ကိုသက်ဇင်သို့ဖဒိုိမန်းရှာ လှေသမားသုံးဦး ဦးဂမ္ဘီရ၊ ကဗျာဆရာစောဝေ (၁) ကဗျာဆရာစောဝေ (၂) ကိုအောင်ဝေး (၁) ကိုအောင်ဝေး (၂) Seelan Palay နှင့် Chong Kai Xiong ကိုခင်မောင်ဝင်းနှင့် မပန်းဖြူဖြူပွင့် ကျူရှင်ဆရာဦးအောင်ဖေ ကိုထွန်းထွန်းနဲ့ကေသီအောင်( ၁) ကိုထွန်းထွန်းနဲ့ကေသီအောင် ( ၂) ကိုထွန်းထွန်းနိုင် ကိုဇေယျာသော် အာဇာနည်မ ဒေါ်ခင်မာအေး မီးရှို့ ဆန္ဒပြခဲ့သောမောင်ကျော်ဇင်နိုင် ကိုဇေယျာသော် မဟန်နီဦး နေဘုန်းလတ် စွမ်းအားမြှင့် စစ်သည်တော်သက်ဝင်းဦး (ခ) သံလွင် Hero from Generation Wave စုစုနွေး၊ ဖြူဖြူသင်း နှင့်နီလာသိန်း ဦးအုန်းသန်း ကိုမောင်စန်း ဂီတမှုး ကိုဝင်းမော်
ဓါတ်ပုံကိုနှိပ်ပါ။ Zawgyi-One latest version1.0.0.1.1 Keyboard layout ကဒီမှာ
Politics Poster (11)
ကြည့်ချင်တာတွေ..ဒီမှာလာကြည့်ပါ.... ချစ်သူသို့ လွမ်းတဲ့စာ..မသဒ္ဓါရဲ့ကဗျာ..
သတင်း မီဒီယာများ 11 Media Group BBC Burma Independent News Agency Burma News International Burma Daily Burma Digest Burma Net Burma Today DVB
Hitaing Independent Mon News Irrawaddy Kachin Kaladan Kaowao News Khit Lu Nge Khonumthung News May Kha Mizzima Moemaka Myanmar Times Narinjara The New Era Journal New Light of Myanmar Ngu Yin Pyin NMG Reboun88 Radio Free Asia SHANGroup Snap Shot News Journal VOA Yangon Meida Group Yoma3 Moemaka. Radio Myanmar Bloggers